Jiri Ndepụta nke echiche ire ahịa keepụta tolite ire ahịa E-azụmahịa gị
Anyị edeela mbụ gbasara njirimara na arụrụ ọrụ dị mkpa maka mmata webụsaịtị e-azụmahịa gị, nkuchi na ahịa na-eto eto site na njirimara njirimara e-azụmahịa a. Enwekwara ụfọdụ usoro dị oke egwu ị kwesịrị ịme mgbe ị na-ebulite atụmatụ e-azụmahịa gị. Ndepụta atụmatụ ahịa ahịa Ecommerce Mee mmetụta mbụ dị ịtụnanya na saịtị mara mma nke ezubere iche maka ndị zụrụ gị. Ọhụụ dị mkpa yabụ tinye ego na foto na vidiyo na-anọchi anya ngwaahịa gị kacha mma. Mee ka igodo saịtị gị dị mfe iji lekwasị anya
Tuzdee, Machị 22, 2022 Wednesday, April 27, 2022 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu njikwa ọdịnaya ama ama, ị ga-ahụkarị nnukwu nhọrọ nke ngwaọrụ na wijetị enwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa iji kwalite saịtị gị. Ọ bụghị ikpo okwu ọ bụla nwere nhọrọ ndị ahụ, n'agbanyeghị, ya mere ọ na-achọkarị mmepe nke ndị ọzọ iji jikọta njirimara ma ọ bụ ikpo okwu ịchọrọ ime. Otu ọmụmaatụ, n'oge na-adịbeghị anya, bụ na anyị chọrọ ijikọ nyocha Google kachasị ọhụrụ na saịtị onye ahịa na-enweghị ịmepụta ngwọta ya.
Onye nrụpụta koodu QR: Otu esi emepụta na jikwaa koodu QR mara mma maka dijitalụ ma ọ bụ bipụta
Tuzdee, Machị 1, 2022 Tuzdee, Machị 1, 2022 Douglas Karr
Otu n'ime ndị ahịa anyị nwere ndepụta nke ihe karịrị 100,000 ndị ahịa nke ha zigara ma ha enweghị adreesị ozi-e iji kparịtara ha ozi. Anyị nwere ike ịme ngwa ngwa email dabara nke ọma (n'aha na adreesị ozi) wee malite njem nnabata nke na-aga nke ọma. Ndị ahịa 60,000 ndị ọzọ anyị na-ezigara ozi mmalite ngwaahịa ọhụrụ ha akwụkwọ ozi. Iji kwalite arụmọrụ mkpọsa, anyị na-agụnye